IHE OMUME KACHASỊ MMA MAKA IKIRI TELIVISHỌN - WINDOWS - 2019
Ihe omume kachasị mma maka ikiri telivishọn
N'oge na-adịbeghị anya, edere m banyere otu esi ele TV na TV n'efu na ihe nchọgharị, ma ugbu a, ọ ga-abụ maka mmemme maka otu nzube. N'ọnọdụ ụfọdụ, usoro a nwere ike ịdị mma - ọ dị ngwa ngwa, dịka iwu, ọtụtụ ntanetị dị, ma, ọzọ, ị gaghị ahụ ọtụtụ mgbasa ozi dịka mgbe ị na-eji weebụsaịtị.
Nyochaa gụnyere mmemme maka ikiri telivishọn na kọmputa Windows na Mac, nakwa na gam akporo, iPhone na iPad phones na tablets. Ana m ebu ụzọ kwuo na ọtụtụ n'ime ngwaahịa ndị a chọrọ ga-achọ setịpụ codecs video na kọmpụta, yana Adobe Flash na plug-ins Microsoft Silverlight. Hụkwa: Otu esi ele TV n'igwe ma ọ bụ ekwentị.
Usoro ProgDVB dị na nsụgharị na n'efu ma na-akwụ ụgwọ ma bụrụ ngwa dị ike nke ị na - apụghị ịhụ nanị na telivishọn TV, ma ọtụtụ ihe ọzọ, dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịrụ ọrụ na TV satellite na IPTV, teletext na ndepụta okwu, usoro ihe omume ahụ Ihe ngosi TV, ikuku mgbasa ozi na ihe ndị ọzọ.
Ndepụta nke ọwa dị na mbara igwe dị oke - ebe a bụ ọwa TV na mba ndị ọzọ na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị Russia niile nwere ezigbo mma (ndepụta adịghị ezu):
Channel One ma ọ bụ ORT
Russia 1, Russia 2 na 24
TNT, NTV, Ren TV na STS
E nwekwara ohere nke ige ntị na redio Ịntanetị.
Nanị nsogbu nke onye ọrụ ahụ nwere ike izute bụ na mgbe ị wụnye ihe omume ahụ, ị ​​nwere ike ịnweta ntọala ndị ọzọ maka codecs maka playback na mpaghara ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ọ bụghị ọwa niile dị na listi ihe omume ahụ ka a na-emegharị: o yiri ka ụfọdụ njikọ na mgbasa ozi na-adịghị adị.
Otú ọ dị, ọ bụrụ na ị dị njikere ịghọta, ProgDVB bụ ihe omume kachasị mma maka ikiri TV na netwọk. (Ee, site na ụzọ, ị nwere ike ịgbakwunye mgbasa ozi nke gị maka ịlele na ProgDVB, ya bụ, ọ bụghị nanị na ndepụta ndepụta ndị a chọrọ).
Ị nwere ike ibudata ProgDVB maka Windows na Russian site na saịtị ndị ọrụ: http://www.progdvb.com/eng/download_progdvb.html
ComboPlayer - usoro dị mfe maka ikiri TV na Russian
ComboPlayer bụ usoro freeware na-adị mfe ma dị mfe, nke na-enye ndagwurugwu 20 nke ọwa TV ndị kachasị mma na TV dị mma (ogo HD na ntanye ndị ọzọ dị maka ịkwụ ụgwọ). Tụkwasị na nke ahụ, e nwere nnukwu ndepụta nke redio redio dị na Russian. Ihe ndị dị mkpa nke usoro ihe omume ahụ bụ enweghị mgbasa ozi na njikwa na ntọala. Nyocha zuru ezu banyere usoro ihe omume ahụ, ntọala ya na ebe ibudata - Nwee free iji hụ TV ComboPlayer TV.
Obere TV - TV n'igwe na Windows, Mac, maka gam akporo, iPhone na iPad, yana ntanetị ndị ọzọ
Ngwa maka ikiri telivishọn telivishọn Crystal TV kwadoro, o yiri ka ihe ọ bụla a ma ama, ya bụ:
iOS (iPhone, iPad na iPod Touch)
Ya mere, ị nwere ike ịlele TV n'efu na PC, laptọọpụ, ekwentị na mbadamba site na iji usoro a.
Ihe ngwugwu a na-agụnye ọtụtụ ọwa TV ndị Russia na-ewu ewu, tinyere Channel One na Russia, Ren TV na Channel 5, otu usoro TV na ọtụtụ ndị ọzọ. A ghaghị akwụ ụgwọ telivishọn ndị anaghị etinye na ngwugwu dị mkpa maka ndenye aha.
Ịnwere ike ibudata Crystal TV maka ngwaọrụ mkpanaka n'ime ụlọ ahịa ngwa ngwa, maka Windows na Mac - na weebụsaịtị website http://www.crystal.tv/ru-ru/index.html
Ngwudata n'efu RusTV Player ga-ekwe ka ị na-ekiri online niile ọwa Russia na-ewu ewu dị mma nakwa site na njikwa dị mfe. Enwere ọtụtụ ebe maka ọwa ọ bụla, yabụ ọ bụrụ na otu n'ime ha adịghị arụ ọrụ, ị nwere ike ịhọrọ onye ọzọ mgbe niile, n'ihi ya, a gaghị ahapụ gị na telivishọn. E nwekwara nkwado maka redio Intanet.
M ga-akwado usoro ihe omume ndị a maka ndị ọrụ ọhụụ n'ihi na ọ dị mfe nghọta na nghọta asụsụ Russian.
Mana enwere otu ihe bara uru ịṅa ntị na: n'oge echichi, RusTV Player na-enye gị ịwụnye ọtụtụ ihe ndị ọzọ achọghị ngwanrọ, kpachara anya ma jụ ya.
Ịnwere ike ibudata onye ọkpụkpọ TV RusTV Player site na saịtị ọrụ.
Imelite 2015: Ntị, Trojans pụtara na RusTV Player, ebudatala.
SPB TV maka Android na iOS
Ihe ọzọ na-ewu ewu, free na akwa-ngwa ngwa maka ngwaọrụ mkpanaka, e mere iji lelee televishọn na tebụl gị na ekwentị - SPB TV. Ịnwere ike ibudata ya na ụlọ ahịa ngwa ngwa nke Google Play na ụlọ ahịa Apple.
Isi ihe nwere ike ịdebe na SPB TV bụ interface dị mfe na dị mfe, na-ekiri ihe omume TV na ezigbo set nke Russian ọwa dị elu:
Russia 1, Russia 2 na Russia 24
Moscow 24 na omenala
A-Otu, Mtv, TV Bridge, Igbe Music
Ihe niile dị n'elu, yana ọtụtụ chanel TV ndị ọzọ nwere ike na-ele n'efu. Ọbụna ọtụtụ ọwa dị iche iche dị site na ndenye aha. Na mgbakwunye na Russian, a na-enwetakwa isi na asụsụ ndị ọzọ. N'ozuzu, ana m akwado. M onwe m na-eji SPB TV kemgbe ụbọchị Windows Mobile.
Enwere ọtụtụ ngwanrọ ndị ọzọ maka ikiri TV, ma eleghị anya ị maara ihe dị mma karịa ihe m kọwara. Ma m ga-achọ ịdọ ndị ọrụ nyocha ọhụụ aka na ụfọdụ n'ime mmemme free maka ikiri telivishọn na-enwekarị ndị na-etinye mgbakwunye ngwanrọ na-achọghị na kọmpụta ma ọ bụ ọbụna na-ebu nje na trojans, ya mere lezie anya ma lelee nje site na nbudata.